musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » WTM Responsible Tourism Awards Vahwina Vakaziviswa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • misangano • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
WTM Responsible Tourism Awards Vakahwina Vakaziviswa.
Vakahwina muWTM Responsible Tourism Awards vakaziviswa, vachipemberera zvakanakisa mukuita pasi rose.
Mibairo iyi, yakatanga kutangwa muna 2004, inocherekedza nekupa mibairo mabhizinesi nenzvimbo dziri kubatsira kune indasitiri yekushanya yakagadzikana uye ine mutoro.
Vanokunda vakasarudzwa neboka renyanzvi dzeindasitiri, iro rakasangana pamhepo kuti ribvumire boka repasi rose rakasiyana.
Gore rino, India yakamira pamibairo iri kubuda senyika inotungamira kune Responsible Tourism.
Nyika dzeIndia dzakaona mabhenefiti muKerala kubva mukuedza kweResponsible Tourism Mission iyo yanga ichishanda kubvira 2008.
Vakahwina Mubairo weGlobal vakasarudzwa kubva kune akanakisa eIndia neMamwe Makwikwi eWorld Awards pamwe chete nevakanakisa veavo vakatopinda muAfrica neLatin America.
Kuchinja kwemamiriro ekunze kunesu. Ndicho chinhu chatinofanira kudzidza kurarama nacho. Kuchinja kwemamiriro ekunze kuchave nemhedzisiro yakakura kumabhizinesi ari muchikamu chedu uye vanhu nemhuka dzesango mumisika yekuvamba nenzvimbo.
Tinofanirawo kutsvaga nzira dzekudzikisa huwandu hwekabhoni iyo vanhu vari kufamba uye vari pazororo vanokonzeresa kuburitswa.
Isu tinofanirwa kushandura kugadzirwa uye kushandiswa kwekushanya - kufamba, pekugara, zvinokwezva uye zviitiko zvese zvinofanirwa kuita kudzikisa greenhouse gasi.
Kuburikidza neMibairo tinoda kuratidza mienzaniso yetekinoroji, masisitimu ekutonga uye nzira dzekuchinja maitiro evatengi zvakaratidza kudzikisa kuburitswa kwegasi regreenhouse.
Vatongi vezvikomborero zvepasi rose vakataura kuti kune munda wakasimba zvikuru gore rino uye vaida kusimbisa kukosha kwechizvarwa chakachena chesimba uye chii chingaitwa, nekutora zvigadziriso zveunyanzvi, kuwana kuderedzwa kwechokwadi uye kwakakosha mukubudiswa.
Govardhan Village inzvimbo ye100-acre retreat centre uye modhi yemapurazi nharaunda, kambasi inoratidza imwe tekinoroji uye inopa misangano yekugara uye zvirongwa zvekudzidza, zvichikwezva vashanyi zviuru makumi mashanu pagore. Vatongi vakanyanya kufadzwa nekuedza kwakaitwa kuGovardhan kudzivirira kubuda muzvikamu zvekuvaka nekushanda. Nekuburitsa zero, 50,000kW yemapanera ezuva anoendesa 210 mayunitsi emagetsi pagore.
Biogas plant inoshandura ndove yemombe nedzimwe tsvina ine mvura inoenzana ne30,660 units. Iyo pyrolysis chirimwa inogadzira tsvina yepurasitiki kuita 18,720 malita emafuta edhiziri 52,416 mayunitsi emagetsi. Kutariswa kwemagetsi kunochengetedza 35,250 zvikamu.
VeSoil Bio-Technology varimi vanogadzira tsvina kuita mvura yegrey inoshandiswa pakudiridzira, ichichengetedza mayunitsi 247,000 75 anodiwa kudhonza mvura kubva murwizi uye kukohwa kwemvura inokwana kwemwedzi yakawanda kupfuura mwaka wekunaya kwemvura. Zvivakwa zviri pakambasi zvakavakwa kubva kucompressed stabilized earth blocks (DSEB). Kunyange zvazvo rusvingo rwezvidhinha rwakafanana runotora 0.275 MJ yesimba, rusvingo rweCSEB paGovardhan rinotora 100 MJ chete; zvinhu zvese zvinotorwa kubva mukati meXNUMXkm kudzikisa kuburitsa kabhoni kubva mukutakura.
Kutsigira Vashandi uye Nharaunda kuburikidza neDenda
Isu tinoziva kuti denda riri kure nekupfuura, uye sekuyeuchidza kunoita World Health Organisation, hatina kuchengeteka kudzamara tese takachengeteka. Zvinozotora mimwe mwedzi yakawanda kuti mavhoriyamu ekufamba uye ezororo adzoke kune chero "zvinyowani" zvichave. Tinoziva kuti mabhizinesi mazhinji nemasangano ari muchikamu chekushanya nekushanya akashanda nesimba kuchengetedza vashandi vavo nenharaunda dzavanoshanda nadzo nemhedzisiro yakanaka pasirese. Kwakawanda kwekuedza uku kwakabatanidza vamwe muketani yavo yekugovera uye vatengi.
Tinoda kuziva uye kukwevera ngwariro kune avo vakabudirira kubatsira vamwe, vashandi nevavakidzani zvakafanana, kukurira dutu.
Iyo V&A Waterfront inoratidza zvinogona kuwanikwa nebhizimusi rakakura rekuenda iro rakatsunga kushanda nekushandisa chiyero charo uye hutongi kubatsira avo vasina kubatirwa pamwe nekutarisirwa pasi.
V&A Waterfront inzvimbo yakasanganiswa-inoshandiswa pachiteshi chengarava muCape Town, "puratifomu inofambisa uye inokwikwidza hunyanzvi uye dhizaini, kutsigira bhizimusi uye hunyanzvi, kutungamira kubhadharisa uye kufambisa shanduko yakanaka munharaunda nehupfumi."
Yakaramba ichikura basa pa3.7% pagore kuburikidza nedenda. Muna Zvita 2020, nyaya dzichikwira, vakatanga Makers Landing, nharaunda yechikafu inopemberera tsika dzakasiyana dzeSouth Africa kuburikidza nechikafu.
Kune kicheni yakagovaniswa incubator, kicheni yedemo, zviteshi zvisere zvekugadzira, musika wezvikafu une angangoita makumi matatu neshanu masitendi emusika anochinjika, masere madiki e-co-op eateries uye mashanu anchor maresitorendi ehukuru hwakasiyana. Tarisiro iri pane vekutanga-mabhizinesi (kutanga-up, aspirant uye grassroots) vane kushomeka kwekuwana zviwanikwa muzvikafu zvakaputirwa, chikafu uye maindasitiri ekubika. Pamusoro pemabhizimisi madiki gumi nemanomwe, mabasa matsva makumi masere nemana nemabhizinesi matsva masere akavakwa, 35% yevatema, 17% yevakadzi vachitungamira.
Vakachengeta zvirongwa zvekudzidzisa uye zvevarairidzi, vakapa rubatsiro (R591,000) nemapasuru ezvekudya R1.3m) uye vakaramba vachipa mari yeJustice Desk muNyanga Township.
Kuti vatsigire kuchengetwa kwemabasa mumaSMME, vakakwidza mari yekushanda kuti vatsigire mabhizinesi makumi mana nemapfumbamwe, anosvika miriyoni mazana maviri nemazana mashanu emadhora, achitsigira mabasa mazana maviri nemasere echigarire uye zana negumi nerimwe uye nekupa mukana wekuongorora kuyerera kwemari nerutsigiro uye R49 miriyoni yekurenda kuvaroja vavo mazana maviri nemakumi manomwe. Kubva mubindu ravo remudhorobha, vakapa Ladies of Love, chirongwa chekudya chemukati meguta chinopa chikafu kune vanoshaya, ari pasi pematani matanhatu emuriwo, kubva ipapo 2.52 208 chikafu chakapihwa mumakicheni gumi nemaviri mumakore maviri. Iyo V&A Waterfront inogona kutarisirwa kuve nekukanganisa kwakakosha; zvinoita.
Vatongi vakanyanya kufadzwa nemaitiro avo matsva uye kutsunga kuenderera mberi nekukura mikana yenzvimbo dzinotambura nedzisina.
Nzvimbo Dzinovaka Kudzoka Zvirinani Post-Covid
MuMibairo gore rapfuura, takaona nzvimbo dzakati wandei dzanga dzichitanga kufunga nezve mavhoriyamu evashanyi uye zvikamu zvemusika izvo zvavachakwezva post-Covid uye vamwe vanga vachifunga nezvekudzikisira. Kuwedzera kusingachinjiki kwenhamba dzevashanyi kwakamiswa nedenda. Nzvimbo dzakawanda dzekuenda dzakave ne "kufema". Chiyeuchidzo chekuti nzvimbo yavo yaive yakaita sei mhomho isati yasvika. Mukana wokufungazve nezvekushanyirwa uye zvichida kusarudza kushandisa kushanya pane kushandiswa nako.
Chimwe chezvishuwo zveResponsible Tourism Awards kukurudzira mabhizinesi nenzvimbo dzekuenda kuti dzidzidze kubva kune vamwe, kudzokorora uye kuwedzera kubudirira. Vatongi veGlobal Awards vaida kuziva nekupemberera kuti Madhya Pradesh iri kukwevera sei pakudzidza kubva kune vamwe, kunyanya Responsible Tourism Mission muKerala, kuti ikurumidze uye ikure mabatiro ayo munharaunda dzekumaruwa.
Madhya Pradesh Tourism Board's Rural Tourism Chirongwa iri kuitwa mumisha makumi matanhatu muchikamu chekutanga uye makumi mana muchikamu chechipiri mumakore matatu. Chirongwa ichi chinopa mushanyi ruzivo rwechokwadi uye rwepasi pekumaruwa kuburikidza nezviitiko zvekumaruwa zvakati wandei sekukwira ngoro dzemabhuru, kurima netsika nemagariro uye mukana wekugara mudzimba kumaruwa kuti vawane mabasa nemimwe mikana yebhizinesi kunharaunda dzekumaruwa.
Kushanya kwekuratidzwa uye kudiwa-kwakavakirwa kudzidziswa pamusoro pekushanda kwemba, kubika, hutano nehutsanana, kuchengetedza mabhuku uye accounting, kuchengetedza imba, manejimendi eimba yevaenzi, kutungamira, kunzwa kune vafambi, kutora mafoto uye mabloggi ari kupihwa. Kuuya kwevashanyi kwakagadzira basa kune vatungamiriri, vatyairi, maartist, nemimwe mikana yekutengesa zvinhu nemasevhisi kune vashanyi. Vashandi vemumisha iyi vari kuitawo mabasa akasiyana-siyana eupfumi hwemuno kuburikidza nekusimudzira mabasa emawoko pasi pezvirongwa zvekusimudzira zviyeuchidzo.
Pamwoyo wepurojekiti kuzvipira kusanganisa, "Mumwe uye vese vanofanirwa kuwana mugove wavo wakanaka". Vari kushanda nemapanchayats kuti vabatanidze vanhu zvisinei nemagariro (yemuviri, nhanho yekuverenga, murume kana murume, kugona, zvechitendero, zvipingaidzo zvetsika, nezvimwewo) uye mamiriro ehupfumi (varidzi vevhu, huwandu hwemari, kuwana masevhisi anowedzera mikana yehupfumi, nezvimwewo)
Kuwedzera Kusiyana-siyana muKushanya: Inosanganisirwa Sei Indasitiri yedu?
Tinofamba tichiona dzimwe tsika, nharaunda nenzvimbo. Kana kwose kwose kwakanga kwakafanana, sei kufamba? Kunyangwe tichitsvaga kusiyana-siyana kuburikidza nekufamba, takaona kuti kusiyana-siyana hakuwanzo kuratidzwa muindasitiri iyo inobatsira vamwe kuve nezviitiko zvakadaro. Kusiyana-siyana ishoko rakakura: "kuzivikanwa kunosanganisira, asi hakugumiri pa, kugona, zera, dzinza, kuzivikanwa kwevakadzi uye matauriro, mamiriro ekubvakacha, kusiyana kwenjere, kwakabva nyika, rudzi, chitendero, zvepabonde, uye hunhu hwepabonde.
Hatitarisire kuwana sangano rakaita budiriro inooneka pazvose izvi mumakore mashoma apfuura. Kune indasitiri yedu, ndeye vatinopinza basa pamatanho akasiyana, avo watinoshambadzira, nzira yatinopa kwatinotengesa, huwandu hwezviitiko zvatinosimudzira, uye nyaya dzatinotaura. Tinoratidza zvakanaka sei kusiyana kwenzvimbo dzatinotengesa?
Chikamu ichi chitsva kumaAward gore rino, uye takagamuchira mamwe akasiyana siyana.
Vatongi vakafadzwa nekusiyana uye kuwanda kwezviitiko izvo No Footprints inopa yehupenyu hwazvino muMumbai, ichipa nzwisiso yechokwadi kuvafambi nevanoita mazororo. Vakazivikanwa seBest Tour Operator muIndia Responsible Tourism Awards muna 2020: "Hapana Footprints inogonesa vashanyi kuti vabatane nenharaunda dzakaita kuti guta rive zvariri muzvizvarwa, kusangana navo, uye kunzwa nyaya dzavo. Hapana Footprints inopa mikana yekusangana neParsees, Bohris, maIndia ekumabvazuva uye nharaunda yevaenzi. " Muna 2021 ivo vakazivikanwa muWTM Global Responsible Tourism Awards.
Hapana Footprints curates niche kufamba zviitiko zvevafambi. Kwemakore matanhatu apfuura, vakagadzira makumi maviri nemaviri akasiyana ezvakaitika kuMumbai uye vari kuwedzera kusvika kuDelhi. Chishuvo chavo ndechekuzivisa vafambi kunhoroondo, tsika, uye marudzi akasiyana eMumbai neDelhi. Pakati pekushanya kwavo kunonyanya kufarirwa kuMumbai mambakwedza, kufamba kwechikafu mumigwagwa, Worli Fishing Village, Colonial Walk uye rwendo rwavo rwekuvandudza rwakagadzirirwa kufadza pfungwa shanu, zvinoonekwa uye manzwi, kusanganisira chiitiko chako cheBollywood, kuravira kweKonkan fare, the kunhuwa kwemusika wezvinonhuhwirira uye kubata Mumbai kuburikidza nezviitiko munharaunda yenharaunda kana nekutaura chitima chakazara nevanhu.
Ivo vanopa art uye yekubika mashopu, rwendo rwenhaka kutenderera uye mukana wekuona kunakidzwa kwekiriketi. No Footprints vari kuwedzera huwandu hweshanyo dzinopihwa kune vafambi uye kusimba kwezviitiko zvavanopa. Queer * -kushanya kwehushamwari ikozvino kwave kupihwa neakasiyana emakambani muIndia. No Footprints akaenda kupfuura kuva gay ushamwari. "No Footprints 'Queer's Day Out inopa zuva rakazara rekutamba nemhando dzakasiyana-siyana dzinoronga hupenyu hweQueer hwevanhu muguta. Rwendo urwu runosanganisira kushanya kutemberi yamwarikadzi anonamatwa nenharaunda dzechinyakare dze transgender dzichigadzira mukana wekukurukurirana nezvekufamba nechikepe uye Grindr, Kudada, Kubuda uye Kuzvuzvurudza. Queer vanhu curate uye kutungamirira kushanya, nechokwadi chokwadi uye zvichiita kuti vashanyi kuwana muono muQueer tsika yeguta.
Kuderedza Plastic Marara Munzvimbo
Denda reCovid-19 rawedzera zvakanyanya huwandu hwepurasitiki-yekushandisa, zvichiwedzera dambudziko remarara epurasitiki. Marara epurasitiki ave kupinda mucheni yezvokudya zvemamwe marudzi pamwe chete neyedu. Kana plastiki yangopinda mumigero yemvura, inoperera mumarara emarara mumakungwa, kumahombekombe uye mudumbu rehove tobva tadya. Indasitiri inofanirwa kuita zvakawanda kudzikisa mashandisirwo ayo epurasitiki-anoshandiswa kamwe chete uye kutora mutoro uye kushanda nenharaunda dzenharaunda nehurumende dzadzo kutora marara epurasitiki nemambure uye zvipingamupinyi zvinoyangarara uye kuisimudza kuti iite semakobhu, fenicha nemhizha.
Vatongi veGlobal vakafadzwa nehupamhi hwenzira idzo manejimendi akashanda kudzikisa kushandiswa kwemapurasitiki munzvimbo yekutandarira uye kugadzirisazve cheni yavo yekugovera kubvisa mapurasitiki.
PaSix Senses Resort paChitsuwa cheMaldivian cheLaamu, vashanyi vanobatana neSustainability Tour kuti vaone hunyanzvi uye kuyedza mukuita paPasi Lab yavo, nzvimbo yavo yekuzvigutsa uye kusarasa pasina. Iyo yekutandarira yakazvimisira chinangwa chekuva epurasitiki-isina muna 2022. Izvi zvinosanganisira ese pamberi peimba mapurasitiki asiwo chikafu chekudya. Rimwe rematambudziko avo makuru raive mabhokisi estyrofoam aishandiswa nevabati vehove kuchengetedza hove dzavo mukati vasati vauya nazvo kunzvimbo yekutandarira, vashandi vaishanda nevatengesi vekurongedza uye nevabati vehove veko uye zvino vanopihwa chikafu kunzvimbo yekutandarira mumabhokisi emakadhibhokisi akaiswa mukati nemapaneru akagadzirwa. yehemp, jute, uye huni fibers, 100% biodegradable uye compostable uye kubvisa 8,300 styrofoam mabhokisi gore rega rega. Kuburikidza nereverse osmosis inoteverwa nekucheneswa kwe ultraviolet, mvura yakasefa yemunyu inobviswa munyu, kucheneswa uye kuitwa yakakodzera kugezeswa nekunwa mumabhodhoro egirazi.
Bindu ravo reLeaf rinopa 40 herbs akasiyana uye girinhi, uye 'Kukulhu Village' inopa mazai nehuku kumaresitorendi avo. Nekukohwa zvekushandisa pachitsuwa, nzvimbo yekutandarira inokwanisa kuderedza zvakanyanya kurongedza chikafu chepurasitiki. Vanotengesa maturusi epurasitiki asina muboutique, ayo anosanganisira bhodhoro remvura rinoshandiswazve, bhegi rinoshandiswazve, bhurasho remazino reshenjere, nemapenzura emapuranga. Vaenzi vanotumirwa matipi ekurongedza vachikumbira vashanyi kuti vasiye ega-kushandisa epurasitiki zvigadzirwa kumba uye kutora chero marara epurasitiki kumba kwaanogona kushandiswa zvakare zvirinani. Mambure okuredza akasiiwa, akagezwa pamhenderekedzo yegungwa, anokwidzwa nemabhasikoro.
Zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekutengesa mvura mumaresitorendi ese eSix Senses Laamu zvinopinda muhomwe inopa mvura yekunwa yakachena, yakavimbika kunharaunda dzinoshaya. Six Senses Laamu anomira pachena nekuisa masefa emvura akakwana (97) munharaunda kuti abvise mabhodhoro emvura epurasitiki anodarika 6.8 miriyoni gore rega rega. Vakaitawo pamusoro pe200 pamhenderekedzo yegungwa nekuchenesa matombo-kusanganisira kuendesa data kuProjekti AWARE- uye vakaita zvirongwa zvedzidzo kune vese veruzhinji nezve kusvibiswa kwepurasitiki uye kutambisa marara.
Kukura Rubatsiro rweMunharaunda Economic Benefit
Pachine nzvimbo yeCSR1.0 uye philanthropy, sezviri pachena kubva gore rapfuura Sustaining Vashandi uye Nharaunda kuburikidza nePandemic chikamu. Nekudaro, nekugadzirisa maitiro avanoita bhizinesi, vanopa pekugara nevafambisi vevashanyi vanogona kugadzira mimwe mikana yemusika kunharaunda dzenharaunda mumaketani avo ekupa uye kugadzira mikana yekutengesa zvinhu nemasevhisi zvakananga kuvashanyi.
Izvi zvinosiyanisa hupfumi hwenzvimbo uye kupfumisa nzvimbo yacho mune zvese pfungwa, zvichigadzira humwe hupenyu hwevagari venzvimbo uye hupfumi hwakawanda hwezviitiko, chikafu nechinwiwa, uye zvigadzirwa zvehunyanzvi uye zvehunyanzvi zvevashanyi. Nzvimbo dzekuenda dzinogona kubatsira shanduko idzi, pakati pezvimwe zvinhu, kupa mari-diki, kudzidziswa uye kudzidzisa, kugadzira misika nenzvimbo dzekuita uye nekupa rubatsiro rwekushambadzira.
Mumamiriro ezvinhu edenda vatongi veGlobal vakatsvaga mabhizinesi akange ashanda nesimba kuchengetedza nekusimudzira hukama pakati pevaive vaenzi nevanogona, vachishandisa kurudziro uye kutumira kuburitsa bhizinesi repamba nerekunze kuburikidza nerwendo rwechokwadi. Vakagadziridza bhizinesi ravo nekusimudzira hunyanzvi hwevashandi vavo muhofisi yeMumbai kuti vaone kuti Village Ways inogona kubuda mudenda.
Covid payakaitika, kushanya kwakamira. Musha Ways akagadziridzwa nekugadzira nzendo chaidzo nenharaunda dzemumusha, kusanganisira zviratidziro zvekubika, rwendo rwega rwega rwakakwezva vatori vechikamu vanosvika mazana maviri, kazhinji vachivandudza ruzivo rwekare mhiri kweether. Village Ways yakabudirira kuwana zvibvumirano zvekudzidzisa kubva kuMadhya Pradesh. Vakagadziridza, vakavhara hofisi yavo yekushambadzira kuUK, vachironga kuendesa kunze kuedza kwekushambadzira muUK, uye nekuvandudza hunyanzvi hwehofisi huru yeMumbai.
Ivo vari kuvakazve kutanga kubva kuIndia musika wepamba. Iyo Village Ways modhi yakasarudzika. Vaenzi vanokokwa kuti vafambe nemunzvimbo kubva kumusha kuenda kumusha vaine gwara renzvimbo vachigara mudzimba dzakavakwa nevavariro dzemumusha, dzine, dzinotungamirirwa uye dzine vashandi venharaunda. Makomiti ose emumusha anoona nezvedzimba dzevaenzi anoshanda zvakajeka.
Chirongwa cheBinsar chakatanga Village Ways muna 2005, chichishanda nemisha mishanu. Ivo zvino vanoshanda nemisha makumi maviri nemiviri kuendesa mabhenefiti anooneka ehupfumi nemagariro, nemikana yemabasa kune vechidiki vangangotamira kumaguta. Mari yekushanya inozadzisa pane kutsiva imwe mari kuitira kuti mhuri dzisasiya mabasa echivanhu akaita sekurima. Vanokurudzirawo kuenzana kwevanhukadzi uye kubatanidzwa kwevanhu.